အမှုတော်ဆောင်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား :Rev. San Cung Nung – FGA Tulsa
March 14, 2019 Comments Off on အမှုတော်ဆောင်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား :Rev. San Cung Nung Burmese, Uncategorized, Zokam FGAIM
ရှင်ပေါလုက တိမောသေကို အားပေးစကားပြောရာတွင် “ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်ဆုံးမသြ၀ါဒ ကိုလည်းကောင်း၊ သတိပြု၍ အမြဲတည်နေလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင် ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း၊ နားထောင်သော သူတို့ကိုလည်းကောင်း ကယ်တင်လိမ့်မည်” (၁ တိမောသေ ၄း၁၆) ဟု ဆိုပါသည်။ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် ဆရာ/မကြီးများသည် မိမိဟောကြားသည့်တရားအတိုင်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြောသည့်စကားတိုင်း ပြုကျင့်ဖို့ လိုသည်။ စကားပုံတွင်လည်း “ကိုယ်ကျင့်တရား သည် စကားပြောခြင်းထက် ပို၍ အသံကျယ်သည်” ဟု ဆိုပါသည်။ ဘာဟောသလဲ ဆိုတာထက် ဘယ်လို ပြုကျင့်သလဲ ဆိုတာ ပို၍ အရေးကြီးပါသည်။ ဟန်ဆောင်ပြုကျင့်သောသူများ မဟုတ်ဘဲ သမာဓိနှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းသော အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြရန် လိုသည်။ “သမ္မာတရားနှင့် ဆိုင်သောအကျင့်၊ လျောက်ပတ်သောအကျင့်၊ ဖြောင့်မတ်သော အကျင့်၊ စင်ကြယ်သောအကျင့်၊ သူတစ်ပါး နှစ်သက်ဘွယ်သော အကျင့်၊ ချီးမွမ်းသော အကျင့်ရှိသမျှတို့ကို နှလုံးသွင်းကြဖို့ ဖြစ်ပါသည်” (ဖိလိပ္ပိ ၄း၈)။ အမှုတော်ဆောင်ဆရာ/မများသည် သင်္ဘော ကပ္ပတိန်ကဲ့သို့ မိမိသင်္ဘော (အသင်းတော်၊ အဖွဲ့အစည်း) ထဲတွင် လူပေါင်းများစွာ တင်ဆောင်၍ ခရီးပြု နေသည်ကို သတိပြုပြီး မာန်မာနထောင်လွှားခြင်းဖြင့် ၀ှက်ထားသော ရေခဲတောင်ကြီးကို မတိုက်မိဘဲ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ လိုရာခရီးကို ခေါ်ဆောင်နိုင်သော အမှုတော်ဆောင်များ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သာဓု သစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစို့။